जनमुक्ति सेनाको योगदान र प्रचण्डको धोकापन « Postpati – News For All
तुफान सिंह कालिकोटे पढ्न लाग्ने समय : ४ मिनेट
तुफान सिंह कालिकोटे, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लालसेनाको योगदानलाई जसरी उच्च महत्वका साथ ग्रहण गरिन्छ, त्यो भन्दा कम महत्वको थिएन नेपाली जनमुक्ति सेनाको त्याग र बलिदान । भलै लालगद्दार पुष्पकमलको धोकाधडीले जनमुक्ति सेनाको विघटन भयो । यद्यपि जनमुक्ति सेना न कहिल्यै विघटन हुन्छ, न त यसको अस्तित्व नै नामेट हुन्छ । जबसम्म दुनियाँमा शोषण र उत्पीडन कायम रहन्छ, तबसम्म यसको सार्थकताको अन्त्य हुँदैन ।
अचेल नेपाली राजनीतिक चिया गफमा केपि – प्रचण्ड लुटेरा समुहको फुटको चर्चा चलिरहेको छ । अब फुट मात्रै होइन प्रचण्ड ज्यु तपाइको अब नराम्ररी दशा लाग्ने छ । १९ दिने जनआन्दोलन र १० वर्षे जनयुद्धको उपलब्धिको रक्षासम्म गर्न सक्नु भएन । आम नेताकार्यकर्ताको सपनाहरूलाई कुठाराघात गर्दै खसिको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने संसदिय राजनीतिको सिकार बन्न तयार हुनु भयो ।
खोइ उनीहरूको सपनालाई त केबल आफुने सत्तामा जाने सपना पो बनाउनु भएछ ! त्यो छट्पटाई रहेको आत्माले तपाईं दुनियाँको कुनै ठाँउमा गएनी तपाइँलाई पोल्ने छ । आखिर किन र केका लागि थियोे ? यहि दिन देख्न मात्रै पनि होइन होला ! सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको मुक्तिको लागि भनेर प्रचण्डलाई देशको राजनीतिको मुख्य ठाँउसम्म नेपाली जनताले एकपटक साथ दिएकै हुन् गर्न नसक्नु तपाइँको विवेकको कुरा हो ।
कामरेड जित, बहुबिर, योद्धा, सुनिल, कोपिला, झरना लगायतका झण्डै ८ हजार विद्रोहि पक्ष र राज्यपक्षबाट गरेर झन्डै १७ हजार को परिवारको अवस्था के छ तपाइँलाई थाहा छ ? अहिले बिहान-बेलुकी छाक टार्नसम्म सकिरहेका छैनन् । समाजमा हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक छ, सहिद परिवारहरूलाई । यस्को प्रमुख कारक तत्व तपाइँ हो कामरेड प्रचण्ड ज्यु । र हजारौं घाइते साथीहरू अहिले एउटा सिटामोल र एन्टिबायोटिकसम्म किनेर खाने अबस्था त धेरै टाढाको कुरा भयो एक छाक राम्रोसँग खान पाउनु भएको छैन ।
जनयुद्धको वेला गोलिले नमर्ने वीर योद्धाहरू अहिले दिनहुँ जसो छिमेकी मुलुक भारत लगायत खाडी मुलुकमा ६०-६५ डिग्री सेल्सियसको त्यो घाममा आफ्नो श्रम बेच्दाबेच्दै ज्यान कति वेला के हुन्छ थाहा नै हुँदैन । अनि रातो बाकसमा आउन बाध्य छन् । यो कुनै रहर थिएन बाध्यता हो । यद्यपि जनमुक्ति सेना र नेताकार्यकर्ताको उचित व्यवस्थापन भएको भए, सुखदुःख आफ्नै देशमा गर्ने वातावरण मिलाई दिएको भए किन आज यस्तो अवस्था हुन्थ्यो ।
हिजो प्रचण्ड, बाबुराम, बादल लगायतका नेताहरूको टाउकोको मुल्य तोक्नेहरूसँगको घरज्वाईं भनौँ या पार्टी एकता गरेर दलालहरूसँग मिलेर जनयुद्धका कुसल कमान्डर आफ्नै सहयोद्दा नेत्रबिक्रम चन्द ‘विप्लव’लाई प्रतिबन्ध गर्नु कति जायज थियो ?
यो हामी अहिले चर्चा परिचर्चा नगरौं होला समयले आफै यसको फैसला गर्ने छ । जनयुद्धको अधुरो सपना पुरा गर्न अहिले पनि उहाँ जनताकै घर आँगनमा हुनुहुन्छ ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बाहली भएको देशमा स्वतन्त्र राजनीति गर्ने अधिकार जो कोहिलाई हुन्छ । त्यसैले २०७१ पुस २३-२६ गतेसम्म दाङको तुल्सिपुरमा ऎतिहासिक प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न गरेर “एकीकृत जनक्रान्ती”को कार्यदिशा सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिएको थियो । हाम्रो पार्टीले “एकीकृत जनक्रान्ती”को कार्यदिशाका आधारमा नेपालमा समाजवादी क्रान्ति सप्पन्न गर्ने महान र गौरवशाली योजना बनाएको थियो ।
“संसदवाद, आत्मसमर्पणवाद र बिसर्जनवादका विरुद्ध संघर्ष गरौं !
माक्र्सवाद – लेनिनवाद – माओवादको विकास गरौं !!”
यही कार्यदिशाको आडमा कामरेड विप्लवप्रति आदरणीय जनसमुदायको उल्लेखनीय साथ देखेर अब सकिदैन भन्ने आँकलन गरि विद्रोही नेकपा पार्टीलाई केपि ओलि-प्रचण्डको कथित कम्युनिस्ट सरकारका गृहमन्त्री रामेले प्रतिबन्ध गर्नु निकम्मा सरकार आफै असफल हुनु हो ।
– लेखक पुर्व जनमुक्ति सेना प्रतिबन्धित नेकपा युवा नेता हुनुहुन्छ
‘महल छोडेर गुन्द्रीको बिछ्यौनामा हामीसँग सुत्न आए, फेरि हात मिलाउन सक्छौं’
के युवाहरुलाई नेताहरुले पालेका हुन्छन ?